Mpanampy amin'ny fiantsenana virtoaly: ny fivoarana lehibe manaraka amin'ny varotra varotra? | Martech Zone
Mpanampy amin'ny fiantsenana virtoaly: ny fivoarana lehibe manaraka amin'ny varotra varotra?
Alakamisy, Jolay 11, 2019 Alakamisy, Jolay 11, 2019 Jake Rheude
Amin'ny 2019 izao ary miditra amin'ny fivarotana ambongadiny biriky ianao. Tsia, tsy vazivazy ity, ary tsy izany no laharam-pamenoana. ECommerce dia manohy manaikitra bebe kokoa amin'ny pie antsinjarany, saingy mbola misy ny zava-bita tsy takatry ny saina raha ny momba ny fanavaozana sy ny fanamorana ny biriky sy ny feta. Ny iray amin'ireo sisin-tany farany dia ny fisian'ilay mpanampy mpivarotra sariaka sy manampy.
"Ahoana no ahafahako manampy anao?" dia zavatra efa zatra henontsika rehefa miditra ao amin'ny magazay isika, ary noraisintsika ho azy. Isaky ny tranokala eCommerce efa napetraka tamim-pahalalana izay misy ny endri-javatra UI-friendly toa ny valin'ny fikarohana auto-complete na ny breadcrumb, dia misy maro hafa koa, mba hialana voly, hitroka tanteraka. Mety ho andriamanitra ny fananana mpanampy mpivarotra sariaka mipoitra ary mametraka fanontaniana vitsivitsy vitsivitsy momba izay tadiaviko. Azo atao an-tserasera ve izany? Ity lahatsoratra ity dia hijery ireo mety misy ary mizara fitaovana, torohevitra ary torohevitra sasany.
Fomba entina manambatra ny mpanampy anao manokana
Raha eo am-pivoarana ireo mpanampy amin'ny fivarotana virtoaly, ny programa iray izay hahatsapa ho olombelona ho an'ny mpanjifanao dia tsy azony - na amin'ny teti-bola. Na izany aza, tsy dia sarotra loatra ny manambatra rindranasa maro samihafa hanomezana ny mpitsidika tsiro ny endri-javatra tsara indrindra amin'ny mpanampy amin'ny fivarotana nefa tsy misy fatiantoka be loatra.
Ao amin'ny Facebook Messenger, mahavita azy rehetra i Sephora.
Ny Chatbots dia tsy zava-baovao, fa nihatsara ny UX ary niovaova ny fampiharana azy ireo. Androany dia mora ny mamorona amin'ny fampidirana chatbots amin'ny asanao.
Hafatra Facebook: Fantatrao fa ny mpanjifanao dia mihodina amin'ny alàlan'ny fahana Facebook antsasaky ny andro; maninona no avelao izy ireo handao ilay application raha misy zavatra tadiaviny aminao? Ny fananana rafitra famandrihana mora azo dia toy ny hoe manana mpanampy amin'ny antso manokana - fa tsy mizotra mankamin'ny tranonkalanao, ny fandefasana hafatra aminao ao amin'ny Facebook dia mahatsapa fa toa miresaka amin'ny olombelona izy ireo. Sephora tena nitarika ny fiampangana ho amin'ny ho avy amin'ny tontolon'ny hatsaran-tarehy, miaraka amina endrika chatbot roa samy hafa ao anatin'ny Facebook Messenger mampiasa Assi.st: Azon'ny mpanjifa atao ny mandefa hafatra amin'izy ireo hametraka fotoana ifanaovana amin'ny consultant momba ny hatsaran-tarehy, na afaka mahazo torohevitra momba ny fividianana fanapahan-kevitra izy ireo.
Ny famandrihana sakafo ho an'ny pickup na ny fandefasana dia nanomboka ihany koa tao amin'ny tontolon'ny Facebook Messenger. Starbucks dia hafatra vitsivitsy monja lavitra amin'ny fisian'ny azo alaina ao amin'ny fivarotanao eo an-toerana, afaka milaza aminao ny fifanarahana pizza isan'andro i Dominos, ary mamela anao hamita ny traikefa amin'ny famandrihana manontolo ny Pizza Hut nefa tsy miala amin'ny Facebook akory. Ireo rehetra ireo dia vita amin'ny fampiasana chatbots isan-karazany miaraka amin'ny zavatra niainany mitovy amin'ny rehefa miresaka amin'ny namanao ianao.
Serivisy ho an'ny mpanjifa: i
Ny fampiasana chatbots hanampiana ny mpanjifanao amin'ny fanontaniana momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia toy ny fananana mpanampy virtoaly tsy matory. Tsy ho zakan'izy ireo ireo entana be ireo, fa ny fanamboarana automatique ireo zavatra kely ireo dia mety hampihena ny soroka eo an-tsoronao. Nomena anarana tsara, serivisy toa Bot Bot Azo ampiasaina hananganana mora foana ny scenario, ny fanontaniana ary ny hetsika ataonao - tsy ny haavon'ny be pitsiny amin'ny Bandersnatch fa mahavita ilay asa. Manana taha avo lenta ihany koa izy io: ao anatin'ny fitsapana dia afaka nanao bot chat hamaha 82% ny fifandraisana tsy mila mpiasan'olombelona.
MongoDB manana chatbot amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa toy izao, afaka mamantatra raha mpitsidika mahay ny mpitarika amin'ny fametrahana fanontaniana vitsivitsy, ary raha misy izy ireo dia tariho any amin'ny mpivarotra marina. Sephora dia nipoitra indray tamin'ity sehatra ity - gaga ve ianao fa ao amin'ny lalao serivisy ho an'ny mpanjifa chatbot koa? Ao amin'ny tranonkalany, tsy vitan'ny hoe afaka mametraka fanontaniana tsotra ianao - fa afaka mahazo tolo-kevitra momba ny makiazy avy amin'ny AI aza. Ny mpanjifa dia afaka maka sary ny sarin'ny endrika makiazy tian'izy ireo avy any amin'ny toerana rehetra ary mahazo torohevitra momba izay tokony hatao mba hahafahana miatrika ilay endrika.
Mailaka natokana ho azy
Tsy mora ny mandresy lahatra ny mpitsidika anao hahazo mailaka avy aminao - ahoana raha afaka mandresy lahatra azy ireo ho anao ny chatbot ary mandefa azy ireo amin'izay tena hitany fotsiny? Izay no lazain'ny botan'ny TechCrunch fa tsy misy ezaka fanampiny ataon'ny mpandray anjara mihitsy. Rehefa misoratra anarana amin'ny vaovao manokana an'ny mpamaky amin'ny alàlan'ny serivisy chatbot ny mpamaky, ny rindrambaiko AI avy eo dia manara-maso ny karazan-baovao novakiany ary ireo lahatsoratra izay heverin'izy ireo fa mahaliana azy ihany no andefasan'izy ireo.
Avelao ny StitchFix hiezaka hahafantatra anao tsara kokoa noho ny fahafantaranao ny tenanao
Manangana azy ho maodelin'ny orinasanao
Tsy tsara ve raha toa ny mpanjifanao mahatsapa foana hoe mahazo fanampiana manokana anao izy ireo? Misy orinasa sy indostria vitsivitsy nahavita nanangana ny fahatsapana ho mpanampy manokana ho maodelin'ny orinasany.
Ampahany amin'ny fampitahana boaty famandrihana mahomby ny fikarohana ny zavatra tian'ny mpanjifanao handefasana azy ireo ny zavatra mety. StitchfixNy maodely dia mifantoka tanteraka amin'ny fahazoana ny mpanjifa hilaza amin'i Stitchfix izay tiany, ka afaka mandefa azy ireo zavatra mety ho azy i Stitchfix. Ity personalization ity izay mahatsapa tena tsy manam-paharoa, satria ny olona tsirairay dia ampiarahina amin'ny mpanao azy manokana rehefa avy nameno ny quiz tamin'ny antsipiriany. Mandoa vola ny mpanjifa hisoratra anarana, izay esorina raha mitazona farafaharatsiny ny iray amin'ireo entana nalefa tany aminy.
Na izany aza, tsy misy orinasa afaka mahazo tombony amin'ny mpanaingo manokana mijery ny mombamomba ny tsirairay ary manasokajy amin'ny katalaogin'ny entana. Mampihoron-koditra ny olombelona amin'ny fanodinana data be dia be sy haingana ary manapa-kevitra - izany dia asa ho an'ny faharanitan-tsaina. AI dia ny fomba ampiasain'ny Stitchfix mizana madiodio, miaraka amin'ny fijerin'ny algorithm ny fironana, ny fandrefesana, ny valiny ary ny safidiny mba hamehezana ny lisitry ny sosokevitra hisafidian'ny stylist. Ny AI dia manampy ny stylist, izay avy eo manampy ny mpanjifa amin'ny tena firindrana ara-teknolojia sy olombelona.
Raha nitia an'izany ianao dia mety tianao…
Ny stylist tena manokana dia mahalala izay tianao sy izay novidinao, ary mampiasa izany fampahalalana izany hanoroana zavatra hafa mety ho tianao. Tsy sarotra amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy ny maka tahaka ny “raha tianao io, dia mety tianao ity” tolo-kevitra manokana. Ny antsasaky ny ady dia ny fisoratan'ny mpanjifa fisoratana anarana hahafahanao manangona ny angon-drakitra misy azy ireo, ary ny antsasany kosa dia mampiasa an'io rakitra io amin'ny fomba mahomby. Iza no manao asa lehibe amin'izany? Fantatrao izany. Amazon.
Fantatr'i Amazon fa ny 60% -n'ny fotoana, nisy olona nijery mpanamboatra kafe Keurig koa nijery K-Cups azo ampiasaina, ary angamba kaopy tena izy hisotroana ny kafe. Inona no ataon'ny AI? Manoro ireo vokatra ireo ho an'ny olona rehetra mijery Keurig. Izy io dia toy ny fananana mpanampy virtoaly izay manandrana mamantatra hatrany izay tadiavinao, miorina amin'ny zavatra notadiavinao, ny zavatra tsindrioo, ary ny zavatra nataon'ny olona an-tapitrisany sy an-tapitrisany maro taminao.
Afaka manampy anao hahita ny vokatrao lafatra ve ny AI?
Ny mpikaroka sy ny mpamorona dia manandrana mamaly hatrany ny fanontaniana: Afaka manao mpanampy amin'ny varotra virtoaly tena manokana ve isika? Amin'izao fotoana izao dia misy rindranasa mahaliana roa izay manakaiky.
Ny iray dia ny Mac -'s On-Call, izay nahagaga talohan'ny fotoanany, ary mampiavaka azy manokana ihany koa ny endrika AI sy ny mpanampy amin'ny fivarotana virtoaly amin'ny fitsidihana fivarotana biriky. Rehefa mitsidika magazay Macy ny mpanjifa dia afaka mitsambikina amin'ny findainy izy ireo ary miditra amin'ny lahasa On Call mba hametraka fanontaniana momba ny lisitra, ny baiko napetrany, na ny mahazo torolàlana mankany amin'ny toerana misy departemanta hafa aza. Ny hany tokony hataon'izy ireo dia ny manorata fanontaniana ary mahazo valiny eo noho eo izy ireo.
Ny Macy's On-Call dia notsapaina tamina magazay 10, saingy tsy nandroso firy tany ankoatr'izay. Na izany aza, toa nampanantenaina izany, ary niara-niasa tamin'i IBM Watson izy ireo. Noho ny fitomboan'ny lazan'ny chatbots dia fampiasam-bola mety hanonitra azy ireo amin'ny ho avy, ary mendrika ny hanandrana haka tahaka ny fivarotana eCommerce virtoaly.
Na izany aza, ny fivoarana farany sy lehibe indrindra dia fampiharana antsoina Elly. Elly no zavatra akaiky indrindra ananan'ny mpanampy amin'ny varotra virtoaly tena hendry - na eo aza izany dia mbola eo amin'ny dingana fampandrosoana izy. AI izy izay manampy ny mpanjifa hahita ny vokatra lavorary amin'ny alàlan'ny fametrahana fanontaniana maromaro, fandanjalanjana ny endri-javatra, vidiny ary zavatra hafa lazain'ny mpanjifa fa miahy azy ireo. Eo amin'ny dingam-pitsapana izy amin'izao fotoana izao, saingy azonao atao izao ny mangataka ny fanampiany amin'ny fitadiavana ny findainao tonga lafatra raha maniry ny hanandrana ny ho avy ianao.
Ahoana no ahafahako manampy anao?
Mpanampy manokana no mahalala ny orinasany anatiny sy ivelany. Izy ireo koa dia mikendry ny hahafantatra fampahalalana marobe mifandraika amin'ny mpanjifany araka izay tratra, mba hanampiana azy ireo handray fanapahan-kevitra amin'ny fividianana saina ary hamela fahafaham-po (ary, mazava ho azy, hiverina bebe kokoa). Ary farany, tian'izy ireo hitranga amin'ny fomba voajanahary sy mahomby izany.
Ny olana amin'ny fampiasana olona mpanampy manokana dia ny tsy fahafahany manakatra tsara sy mampiasa data marobe amin'ny fomba misy heviny. Ny hoavin'ireo mpanampy amin'ny fivarotana virtoaly dia ny manambatra ny fanampiana sy ny maha-izy azy ny mpanampy olombelona miaraka amin'ny hery manangom-baovao sy ny hafainganan'ny faharanitan-tsaina artifisialy. Ny rindranasa tokana dia tsy afaka manao azy rehetra (mbola), fa ny fampifangaroana fitaovana vitsivitsy izay misy ankehitriny dia mety hamaha ny ambaratongam-pahombiazana vaovao ho an'ny orinasa eCommerce.
Tags: chatbotny daomyEllyfacebook messengerH & MMongoDBmanokana stylistsephora
Jake Rheude dia talen'ny marketing ho an'ny Red Stag Fulfillment, trano fanatontosana e-commerce izay teraka tamin'ny ecommerce. Manana traikefa an-taonany maro momba ny ecommerce sy ny fampandrosoana ny orinasa izy. Amin'ny fotoana malalaka ananany dia mankafy mamaky momba ny orinasa i Jake ary mizara ny zavatra niainany manokana tamin'ny hafa.
Topimaso ao amin'ny tranokalan'ny Alexa.com: Misy fiasa vaovao manome ny mpivarotra sary tsara kokoa amin'ny fikarohana sy ny votoatin'ny votoatiny maimaim-poana